काठमाडौं। शालिकराम पुडासैनीको प्रकरणमा न्यूज २४ टिभीका कार्यक्रम प्रस्तोता रवि लामिछाने यतिवेला प्रहरी हि*रासतमा छन् । रविका दाजु हरिशरण लामिछाने, जो चर्चित रेडियो पत्रकार हुन । उनले भाई रविलाई अदालतले न्या*य दिनेमा आफू वि*श्वस्त रहेको सुनाए । बिहीबार राति प्राईम टाईम्स टेलिभिजनबाट प्रशारण भएको कार्यक्रम जनता जान्न चाहन्छन्मा पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै उनले यस्तो दा*बी गरेका हुन् । उनले आफूहरुले रविको पक्षमा नारावाजी गनुपर्छ भनेर हु*लहुज्जत वा समर्थकहरु जम्मा नगरेको पनि जि*किर गरे ।
तर, रविको पक्षमा स्व*तस्र्फूत सडकमा आएका समर्थकहरुको आफ्नो अधिकारको कुरा भन्दै उनले प्र*दर्शन नगर वा सडकमा नआउ भनेर कसरी भन्न सकिन्छ ? भन्दै प्रश्न ते*र्साए । बुधबार राति धमलाको कार्यक्रममा रविको परिवारले यो प्रकरणमा दो*षी भन्दै कि*टानी जा*हेरी दिन खोजेका नेपाल प्रेस काउन्सिलका अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठको अन्तर्वार्ता प्रशारण भएको भोलिपल्टै रविका दाई हरिशरण सोही कार्यक्रममा आएका छन् । कार्यक्रमको सुरुवातमै पत्रकार धमलाले हरिशरणलाई तपाई रविजीको नामबाट चिनिन चाहन्छु कि तपाईको आफ्नै पहिचान छ हाम्रो देश नेपालमा ? भनेर ख*रो प्रश्न ते*र्साए ।
जवाफमा लामिछानेले भने,“पहिचान त फरक फरक नै होला । अब दाजुभाई हो । यो पारिवारिक कुरा हो ।”आफूलाई हरिशरण र रविको दाजु दुवै किसिमले आम मानिसले चि*न्ने गरेको पनि उनले स्पष्ट पारे । धमला यत्तिमा रोकिएनन् ? उनले फेरि प्रश्न सोधे–तपाई भरतपुर जानुभयो, त्यहाँका जनताले कसरी चिने ? यो प्रश्नको जवाफमा लामिछानेले भने, “उहाँहरुले एक्ससेप्ट गर्नुभएन, विद्याको हिसाबले रविलाई टेलिभिजनको सेटमा देखिरहेको, अब कतिपय मान्छेले ए होईन पो कि पनि भने । त्यो अब स्व*भाविक छ ।” धमलाले तपाई आज रविजीको पक्षमा उभिनुभएको छ, किन ? भनेर सोधे ।
लामिछानेले आफू रविको पक्षमा उभिनु नैतिक दा*यित्व भएको सुनाए । उनले भने,“आफ्नो भाई कुनै किसिमको मु*द्दा, मा*मिलामा फ*सिसकेपछि, त्यो हेर्नु एउटा अभिभावकको कर्तव्य हो ।”धमलाले तपाईको भाई ग*म्भिर मु*द्दामा फस्नुभयो भनेर सोधेको प्रश्नमा उनले फ*सेको भन्दापनि ग*म्भिर बनाउन खोजिएको टिप्पणी गरे । उनले शालिकराम पुडासैनीले दे*हत्याग गर्नुपनि ग*म्भिर भएको सुनाए । उनले थपे,“तर, जुक प्रकृतिबाट मु*द्दा अघि बढाउन खोजियो, त्यो पनि ग*म्भिर हो ।” यो प्रकरणमा रविको कुनै हात नरहेको जिकिर गर्दै उनले यसमा रविको हात छ भनेर ज*बरजस्ती गर्न खोजिरहेको पनि दा*बी गरे ।
उनले भने,“शालिकरामले रविको संलग्नताको कुरा गर्यो, उसले रविको राम्रो पनि कुरा गरेको छ । नराम्रो पनि कुरा गर्या छ । नाम उसको मु*छियो । आ*रोप लाग्यो उसलाई । तर, अहिलेपनि अ*नुशन्धान भैरहेको छ । जुन भिडियो बाहिरि नि*स्कियो, उसले रेकर्ड गरेको एउटा सर्टेशन पोर्सनमात्रै बाहिरि आएको छ । लिक भएको छ । उसले चार बजेदेखि ६ बजेको अवधिमा, हामी अहिले आएको १३ मिनेटेको भनिएको भिडियोलाई मान्दैनौं ।” अ*नुशन्धानको दौरानमा विभिन्न मानिसहरु संलग्न रहेको सुनाउँदै हरिशरणले आफ्ना सूत्रले बताएअनुसार शालिकरामले झण्डै दुई घण्टाको अवधिसम्म भिडियो रेकर्ड गराएको छ ।
उनले सुनाए,“त्यो रुममा बसेर उसले पटक–पटक गरेर भिडियो बनाएको छ । अहिले बाहिर सार्वजनिक भएको भिडियो त त्यसको एउटा पोर्सनमात्रै हो ।”बाहिर आएको १३ मिनेटको भिडियो त एउटा भागमात्रै भएको उनको दा*बी छ । उनले भने,“उसले आ*रोप लगाउँदा नाम लियो । रविले अहिले मलाई ल*खेट्दै गएर चितवन लगेर, त्यहाँ रुममा लगेर दे*हत्याग बा*ध्य बनायो त भन्या छैन नि । कुनै सन्दर्भमा उसले रविको नाम लियो । होईन, उसले अरुको पनि नाम लिएको छ ।”शालिकरामले भिडियोमा रविको नाम लिएकोले सं*लग्नता देखिएपनि पुष्टि हुनुपर्ने बताए ।
उनले भने,“त्यो एउटा आधार हुनसक्छ, तर प्रमाण हुन सक्दैन् । सँगै काम गर्दा म*नमुटाव भयो होला । त्यो त एउटा स्व*भाविक प्रक्रिया हो ।” पछिल्लो समय रविसँग लिईएको ब*यान र रविसँगै थुनिएका अन्य दुई जनाको पनि बयान लिने काम भएको सुनाउँदै यो प्रकरणमा रविको खासै सं*लग्नता नदेखिएको कुरा आफूहरुको प्रा*रम्भिक जानकारीमा आईसकेको पनि हरिशरणको दा*बी छ । तर, कानूनको ह*बला दिएर जसले पनि दुःख दिनसक्नेतर्फ पनि उनले ध्या*नाकार्षण गराए । देशमा न्या*य न*मरेको उनको विश्वास छ ।
उनले भने,“देशका न्या*यमूर्तिहरुले भोलि भन्नुहुन्छ की रवि क्लि*न छ कि छैन भनेर, म त पूर्ण वि*श्वस्त छु, भोलि फूलमाला लगाएर मेरो भाई निस्किन्छ ।”उसो भए तपाईहरुले अहिले किन जु*लुश निकाल्नुभएको त ? भनेर धमलाले सोधेको अर्को प्रश्नमा उनले आफूहरुले अदालतलाई द*बाब नदिएको स्पष्ट पारे । उनले अघि प्र*ष्ट्याए,“होईन, वि*श्वसनीय वातावरण किन बनेन ? त्यो प्रतिप्रश्न गरौं न हामी । म जु*लुशमा गईँन् । मैले एकचोटी अदालत परिसरबाट बाहिर निस्किँदा दुई पटक मैले आफ्ना सार्वजनिक कराहरु राखेको हो ।
जुलुक स्व*तस्र्फूत गएको छ । त्यसमा मेरो व्यक्तिगत सं*लग्नता छैन् ।”आफूहरु विधिको शा*सन र कानूनी राज्यको प*क्षमा रहेको पनि उनले पटक–पटक वि*श्वास दिलाए । रविले सुरुवातमै यो प्रकरणमा प्रहरी प्र*शासनलाई अ*नुशन्धानको लागि आफ्नो पूर्ण साथ र सहयोग रहन्छ भनेर बोलेको पनि उनले सुनाए । उनले भने,“रविले त ए*डभान्समै भनेको थियो कि यो धरपकड गर्नै पर्दैन्, कहिले बोलाउनुहुन्छ म त्यही दिन आउँछु भनेको थियो । मानिसहरु पनि जु*लुशमा किन आएका छन् ? भन्ने कुरा यसमै केन्द्रित छ । रविलाई दो*षी वा नि*र्दोष कवुल गर्ने कुरा त एउटा प्र*क्रियामा गैसक्यो ।
उसको अ*नुशन्धान भैरहेको छ ।”उनले भी*डतन्त्रले सचेत गराउनसक्ने पनि औंल्याए । उनले थपे,“आम मान्छेले के भनेका छन् भने यो सबै रविलाई फ*साउने प्र*पञ्चभित्रको हो भन्ने कुरा चाहीँ उहाँहरुको मनमा परेको छ ।” यो प्रकरणमा अ*नुशन्धान कतातिर केन्द्रित छ ? यसबाट आफूहरुलाई आ*शंका पै*दा भएको पनि हरिशरणले सुनाए । उनले भने,“अ*नुशन्धान कता केन्द्रित हुनुपर्र्छ भन्नेबारे हामी चाहना त राख्न सक्छौं, तर अदालतलाई हामी प्रभाव गर्न सक्दैनौं ।” भिडियो